ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီမှာ ထည့်သွင်းဖို့ ချင်း လွှတ်တော်အမတ် အဆိုပြု
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး ကော်မတီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုကော်မတီဝင် အဖြစ် ထည့်သွင်းဖို့ ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီ လွှတ်တော်အမတ်က ဒီကနေ့ အဆိုပြုလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ နေပြည်တော် သမ္မတ အိမ်တော်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် သတင်းကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်လွှင့်ခဲ့စဉ် မြင်ကွင်း ဖြစ်ပါသည်။
နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ ဆက်လက်ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီက ဦးပေါ်လျံလွင်က လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့အရေးကို တင်ပြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရာမှာ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါး ဘောင်အတွင်းက ဆွေးနွေးဖို့ တင်ပြချက်ကို တိုင်းရင်းသားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီအနေနဲ့ သုံးသပ်ပြီး ပြန်လည် တင်ပြဖို့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကို လွှွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦး က ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြအပြီး အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြချက် အပြည့်အစုံကို ဆက်လက် နားဆင်ပါ။
ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အဆိုတခုနဲ့ သတင်း သုံးသပ်မှုကို လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ပြနိုင်ခွင့် အတွက် အဆိုမူကြမ်း တခုတို့ကို တင်ပြခဲ့ပြီး အဲဒီ အဆိုကို စက်တင်ဘာ ၇ ရက် မနက်ဖြန်မှာ ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေး ကြလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီကနေ့ လွှတ်တော်ကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ရန်ကုန်တိုင်း လသာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြီးမြင့်ကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ၁နာရီကျော်ကြာတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်အဝင်အထွက် တင်းကျပ်လိုက်လို့ ခရီးသွားတွေ အခက်တွေ့
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနား နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပ
SEA Games ကျင်းပမည့် နေပြည်တော်က အားကစားရုံ (၈၅) ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး
အစ္စလာမ်နိုင်ငံရေးပါတီများ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တွေ့ဆုံမည်
ပျဉ်းမနားတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး မီးရှို့သေဆုံး
NLD (နေပြည်တော်) ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
Games playing again. DASSK is representing all Enthics groups and those wish to have TRUE DEMOCRACY. How to propose that SHE be included in the Committee.
Sep 06, 2011 08:14 PM